musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resorts » Iyo Regis San Francisco Inodaidza Nyowani Mutungamiriri Mukuru
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Regis San Francisco yakazivisa kugadzwa kwaRoger Huldi seManeja General
Regis San Francisco, kero yekutanga yeguta renzvimbo dzekugara dzakanaka, sevhisi yebasa uye nekunaka kusingagumi, inofara kuzivisa kugadzwa kwaRoger Huldi pachinzvimbo chemaneja mukuru. Huldi inyanzvi yemahofisi ekugamuchira vaenzi anozivikanwa nekuvandudza zvirongwa zvinofambira mberi uye zvinofambira mberi, Huldi inyanzvi mune zvemabhizimusi ane makore angangoita makumi matatu ane ruzivo achishanda neMarriott International neStarwood Hotels neResorts.
Regis San Francisco yakazivisa kugadzwa kwaRoger Huldi seManeja General.
Huldi anokwanisa kwazvo basa rekugamuchira vaeni mutungamiri anozivikanwa nekuvandudza hunyanzvi uye hunofambira mberi hurongwa uye zvirongwa.
Huldi inyanzvi mune zvemabhizimusi ane makore angangoita makumi matatu ane ruzivo achishanda neMarriott International uye Starwood Hotels neResorts.
Huldi ajoina Iyo Regis San Francisco mushure memakore masere ekugara semaneja maneja weW San Francisco, kwaakatungamira iyo pfuma kuLEED Platinamu Certification uye akaunza zvine simba uye izvozvi zvepasirese zvakagadziriswa zvirongwa. Mukucherechedza hutungamiriri hwaHuldi, iyo American Hotel neLodging Association inonzi W San Francisco iyo 2016 Hotera yeGore.
"Ndiri kukudzwa kupinda pachigaro chemaneja kuSt. Regis San Francisco, inozivikanwa pasi rese nekuda kwekunaka kwayo uye nebasa rekufungidzira," akadaro Huldi. "Ndinozvikudza kwazvo kuti ndinobatana nechikwata chemuenzaniso kuSt. Regis San Francisco apo patinosangana nezvinodiwa nezvizvarwa zvitsva zvevafambi tichichengetedza mwero wakaomarara wechiratidzo cheSt. Regis."
Mufundisi akadzidziswa zvine hunyanzvi, nzira yaHuldi kuenda kumaindasitiri ekugamuchira vaenzi yaive yenzira dzekugadzirira hutungamiriri mune shanu-nyeredzi, zvivakwa zvemhando yepamusoro, kutanga munzvimbo yekuSwitzerland nekuAustralia, kwaakawana degree reBachelor reBusiness Administration degree kubva kuBond University.
Huldi anofarira biker mugomo uye anofamba muchikepe, anofarira kufamba nechikepe paSan Francisco Bay, uye anonyanya kufarira kufamba kwenguva refu nemukadzi wake munzira zhinji dzekukwira dzeBay Area. Iye zvakare inyuchi yekuchengetedza nyuchi aficionado, inoenderana zvakakwana nehotera chirongwa chekuchengeta nyuchi uye nekuzvipira kwakazara kune tsika dzakasimba.
Huldi inhengo yebhodhi inoshanda ye San Francisco Yekufamba Sangano, yeCalifornia Hotel neLodging Association's Kugamuchira Vaeni Foundation, uye Hotel Kanzuru yeSan Francisco.
Regis San Francisco inopa makamuri nemakumi masere nemakumi masere, ese anga achimbofungidzirwa neakakurumbira dhizaini dhizaini yeToronto Chapi Chapo. Kugadziriswazve kwaisanganisira iyo St. Regis San Francisco's 260 square tsoka emisangano uye zviitiko zvezviitiko, ichigadzira yakanatswa, yakagadzikana uye inovandudza nzvimbo dzakagadzirirwa kufambisa hurukuro nekubatana. Iyo Regis San Francisco, sekune zvese zvivakwa zveSt. Regis, inozivikanwa nesaini yayo Butler Service.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Iyo St. Regis San Francisco uye nezvayo zvakawanda zvipo, ndokumbira ushanyire pano.